Kadib - Sheekada filimada si aad u aragto Amazon Prime | Bezzia
Kadib: Sheekada filimada si aad u aragto Amazon Prime
Susana godoy | 11/01/2022 14:00 | Wararka
Haddi aanay wali kuula muuqan, waxa laga yaabaa in aad meel banaan oo aad ku raaxaysato mid ka mid ah sheekooyinka wax badan ka siiya in laga hadlo. Waxa loogu magacdaray 'ka dib' waana sheeko ku salaysan sheeko-abuur ay qortay qoraaga Anna Todd. Xidhiidhka dhalinyarada, niyad jabka ugu horeeya, saaxiibtinimada iyo dhibaatooyinka qoyska ayaa ah qaar ka mid ah fursadaha lagu taabto sheekadan oo kale.
Filim kastaa wuxuu ku salaysan yahay mid ka mid ah buugaagta Todd, ilaa hadda waxaan haynaa seddex filim oo afarta ah oo dhameystiran. Haddii aad rabto in aad wax yar ka ogaato sheeko sidan oo kale ah, taas oo hubaal ah in ay ku soo jiidan doonto, markaa ma seegi karto wax kasta oo soo socda sababtoo ah wax badan ayaa ku xiisaynaya. Diyaar ma u tahay mise diyaar ma u tahay?
1 Ka dib: Wax walba waxay ka bilaabmaan halkan
2 Ka dib: Kun xabbadood
3 Kadib: Naftii Lumay
Ka dib: Wax walba waxay ka bilaabmaan halkan
Sidaan ka wada hadalnay, ilaa hadda waxaa jira saddex filim oo aad ka daawan karto Amazon Prime. Midka kowaad waxaa ciwaankiisu yahay 'ka dib: Wax walba halkan ayay ka bilowdaan'. Halkaas waxa aynu ku ogaanaynaa sida jacaylka dhalinyaradu u leeyahay wax badan oo la yidhaahdo. Waxaan la kulmi doonaa Tessa Young oo ka guureysa gurigeeda sababtoo ah waxay bilaabaysaa kulliyad. Waxa uu yeelan doonaa saaxiibo cusub, kuwaas oo in kasta oo hooyadiis aanay jeclayn iyaga, iyadu ma daneeyaan ugu yaraan. Sidee u yarayn kartaa, wiil ayaa sidoo kale u muuqda nolosheeda. Dabcan, marka ay u muuqato in soo jiidashada labadoodaba ay soo jiidanayso, qof saddexaad ayaa isku dayaya inuu indhaha kala qaado isaga oo u sheegaya in wax walba ay ku salaysan yihiin ciyaar ay sameeyeen hal habeen. Wax aan gebi ahaanba sax ahayn, laakiin taasi waxay Tessa ka dhigaysaa isbeddel xagjir ah. In kasta oo iyada iyo Hardin ay wax badan wadaagaan oo ay u muuqato inay weli wax badan wadaagaan. Haddaba qaybta hore waxay ina tusinaysaa sidii ay isku arkeen, sida xidhiidhkoodu u soo baxay iyo weliba niyad jabkii ugu horreeyay iyo mushkiladaha qoyska.
Ka dib: Kun xabbadood
Markay koraan, sheekooyinka cusub sidoo kale way isbedelaan. Hadda Tessa waxay qorsheyneysaa inay diiradda saarto waxbarashada, sababtoo ah waa waxa ay dhab ahaantii rabto oo u baahan tahay. Sido kale waxa ay heshaa shaqo layli ahaan, markaa waxa ay fursad fiican u tahay mustaqbalkeeda mana rabto in ay wax ka hor istaagto. In kasta oo aysan had iyo jeer ahayn mid fudud sida aan jeclaan lahayn. Sababtoo ah shaqadeeda, waxay leedahay lamaane sidoo kale soo jiidanaya, maadaama ay ogtahay inay tahay nooca ay u baahan doonto dhinaceeda oo aan ahayn qof sida Hardin ah. Tani waxay u muuqataa in ay muujinayso wajigeedii ugu xumaa mar kale waana in markii aad hore u malaysay inaad dhibaatooyin gaar ah ka soo gudubtay, ay dib uga soo baxaan hortaada. Laakin waa run in aadan jaceylka la dagaalami karin, mise waxaa laga yaabaa in aad awooddo? Filimka labaad ee ku jira saga oo aad sidoo kale ku arki karto Amazon Prime Inkastoo aysan helin dib u eegis wanaagsan, waxay u muuqataa in dadweynuhu ay lahaayeen fikrad kale.
Kadib: Naftii Lumay
Waxaan gaadhnay filimkii saddexaad, ilaa hadda waa kii ugu dambeeyay ee aan heli karno si aan ugu awoodno Amazon Prime. Tan iyo markii kan la sii daayay 2021 oo ay tahay inaan xoogaa sugno qaybta afraad inay timaado. Waqtigan xaadirka ah, waxaad mooddaa in xiriirka wada noolaanshaha ee ka dhexeeya labadooda uu ka sii xoogeysanayo. Laakin markii ay u muuqatay in la xoojinayo xiriirka qaangaarka, waalidiinta iyo qoyska mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa soo galaya ciyaarta. Sidaa darteed waxay ogaan doonaan in laga yaabo inay mar kale yeelan doonaan aragtiyo ka soo horjeeda nolosha oo ay xitaa ka shakiyaan dareenkooda, sababtoo ah waxaa jira siro badan oo badan oo lagu muujin doono filimka oo dhan. Laakiin had iyo jeer way fiican tahay inaad adigu naftaada u aragto sababtoo ah waxay leedahay taariikh badan oo lagu soo rogo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Kadib: Sheekada filimada si aad u aragto Amazon Prime